I-Trenbolone Acetate ekuthengiseni: Indlela yokuthenga i-Trenbolone i-Acetate powder online?
/Blog/I-Trenbolone Acetate/Kuphi ukuthenga i-Trenbolone i-Acetate powder?
ezaposwa ngomhla 01 / 01 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo I-Trenbolone Acetate.
1. I-Trenbolone i-Acetate powder
2.Trenbolone I-acetate powder IHlb Life
3.Ziziphi iingenelo zokusebenzisa i-trenbolone acetate powder ekwakheni umzimba?
4.Kuthatha ixesha elide ukuthatha iziphumo ezivela kwi-Trenbolone Acetate powder?
5.Trenbolone I-acetate powder Iziphumo
6.Trenbolone I-acetate powder online
7.Ungayithenga njani i-trenbolone i-acetate powder online?
1.Trenbolone I-acetate powder
I-trenbolone i-acetate powder iyinamandla kakhulu ye-anabolic steroid kwaye ithathwa njengowona mnye mkhulu we-anabolic steroid ngabadlali abaninzi abaphumelelayo. Le enye ye-anabolic steroids eninzi kakhulu kwimarike kwaye inokubonelela ngeenzuzo ngokungafani nenye enye i-steroid. I-trenbolone i-Acetate powder iphinde ixhomekeke kwiindinyana ezininzi kwihlabathi le-anabolic steroid, kodwa sinethemba lokuba siya kukwazi ukukhupha le ngqungquthela size sithole ingqiqo eqinileyo yekhampani. I-Trenbolone i-Acetate powder ihlelwe ngokusemthethweni njengobungcali bezilwanyana ze-anabolic androgenic steroid. I-hormone yeTrenbolone ngokwayo yayidalwa ekuqaleni kwe-1960 kunye ne-Acetate version yayiza kuthengiswa phantsi kwegama elithi Finajet kunye neFinaject.
Ukwahlukana kuphela oya kuphawula phakathi kwezi fom ezahlukeneyo zi-half life-life, kunye namaxesha abo okukhululwa. Imiba enjalo imiselwe ukuba yiyiphi i-ester ethile ehlanganiswe kwisakhiwo se-hormone yomzali. Ii-Esters eziqhotyoshelwe kwi-anabolic steroids zingatshintshi iipropati okanye iziphumo ze-steroid, ngaphandle kwesiqingatha-nobomi kunye nokukhulula izinga.
Iphuzu eliphambili ekunikezeni iifom ezahlukahlukeneyo ze-anabolic steroids kukunika abantu into enokuthi ithathwa njengento ekulungeleyo kwaye yintoni enokuyithandayo. Abanye abantu bakhetha i-anabolic steroids ngokukhawuleza ephethe ubomi obufutshane, ibe ngaloo ndlela ifuna iigciwane. Abanye ngokuqhelekileyo bakhetha ixesha elide lobomi, ngoko ke bafuna ixesha elide liphezulu le-steroid elifuna ukulawulwa ngaphantsi kwexesha.
I-Primo (i-Methenolone Acetate) enye ye-anabolic steroid ekhuselekileyo yabesifazane
I-base base-horbolone i-hormone ithwala isigxina-ubomi kwii-6-8 iiyure, nangona i-hormone esekelwe ingasetyenziswa ngabantu abaninzi. Abadlali abaninzi inject trenbolone inguqulo apho kukho intambo ye-ester. Akunjalo i-plasma iphosa egazini lomntu inamathele kulolu chungechunge lwe-ester ukuba uTren ukhululeke ukusebenzisana kunye ne-androgen receptors kwiiseli zamascle.
Isiqingatha-ubomi se-acetate-ester version malunga neeyure ze-48, ngelixa iinguqulo ze-enanthate zijikeleze ngeentsuku ze-5-7. I-Trenbolone-Acetate, okanye kunokuba i-Tren-Ace, ithandwa kakhulu kuba i-Acetate-ester encinci ixhomeke kuyo. Oku ke, kunika amandla okusebenza ngokukhawuleza. Kwakhona, kukunika inketho yokuphelisa umjikelo ngokukhawuleza ukuba kukho nayiphi na imiphumo emibi ebonakalayo kwaye ibonakala ingenakuxoxwa.
Xa uyeka ukulawula i-Tren-Ace, iqela liya kucoca umzimba ngokukhawuleza kwiintsuku ezimbalwa. Ngenxa yoko, isiqingatha sobomi kuya kunceda ukuphelisa ngokukhawuleza nayiphina imiphumo emibi. I-hexa-hydrobenzylcarbonate ester chain, okanye kunokuba iCyclohexyl-methylcarbonate, iyona indala kunayo yonke into yokuba i-8-10 yentsuku yokuphila.
Kubaluleke kakhulu ukuba uqonde ukuba i-trenbolone acetate powder ayifumaneki njenge-anabolic steroid yabantu. Kunoko, kuye kwaphawulwa ukuba yi-hormone yebanga lezilwanyana. Ngokwenene i-hormone yokuqala eyasiza inkunzi yeenkomo, nto leyo ichaza ukuba kutheni isetyenziselwa ukuhlawula. Kucetyiswa ukuba usebenzise i-trenbolone acetate powder ngendlela enoxanduva, ukuba unokugqiba ukuwuthenga ngenxa yokuba ifikelele kwimiphumo ebalulekileyo. Cofa apha ukuze ubone ukuba ungayiphephela njani imiphumo emibi ye-trenbolone acetate powder.
3.Ziziphi iingeniso usebenzisa i-trenbolone acetate powderekwakheni umzimba?
Ngokuthwala i-Acetate ester, oku kunikeza i-trenbolone i-acetate powder i-half-life active in about two days. Enye idatha ibonisa ubunqamle-bomi bentsuku ukuba ibe yintsuku engaphantsi kweentsuku ezintathu, ngoko ke amashumi amane anesibhozo ukuya ngaphantsi kweeyure ezimashumi anesibhozo-ezimbini ziza kubonakala ziluhlu olufanelekileyo. Oku, ngokusobala, kwenza i-trenbolone acetate powder ngokufanelekileyo ngokukhawuleza ukwenza i-steroid kwaye iya kufuna ukuba iinjenyi zenzeke ngokukhawuleza ukuze kugcinwe amazinga egazini egazi. I-trenbolone i-acetate powder inempawu ezinamandla ezininzi ezidibaniswa ne-anabolic steroids ezininzi. Nangona kunjalo, ngelixa lithwala iziganeko eziqhelekileyo, lithwala nangomlinganiselo wamandla kunye nokusebenza kakuhle ngaphezu nangaphezulu kwe-steroids. i-trenbolone i-acetate powder nayo inomlinganiselo omnye owuhlula kakhulu kwipakethe kwaye yintoni eyona nto ijongene nokwenza i-hormonal idibeneyo. Njengama-anabolic steroids amaninzi, i-trenbolone acetate powder iya kunceda kakhulu ukuphucula iprotheni kunye nokugcinwa kwe-nitrogen kwiisisu zomzimba. Iprotheni yokuqala ibhekisela kwisantya apho iiseli zakha amaprotheni; iprotheni ibonisa isakhiwo esiyintloko esisisiseko semisipha. Oku kuya kukhuthaza ukunyuswa kwe-anabolism, kunye nokubonelela ngomoya okhuselekileyo ngexesha lokulahleka kwekhalori. Kuya kubakho kakhulu ukukhuthaza izinga eliphezulu lokubuyisela.
4.Kuthatha ixesha elide ukuthatha iziphumo I-Trenbolone i-Acetate powder?
Into eyoyikeka kakhulu ngeTrenbolone i-Acetate powder yi-INSTANT iziphumo onokuzifumana. Omnye umntu kwenye yeeforamu ezidumileyo ze-steroid aze afake i-joked malunga ne-50kg kwi-benchpress yakhe ngosuku. Kodwa ke wongezelela, "kodwa akukho nto imele ukuba amandla okwenza ngokukhawuleza abe yi-INSANE" .Wena ulungile. Ininzi maninzi ibona ukuzuza kwamandla kwangoko kwimihla yokuqala okanye ezimbini.
Kodwa i-muscle inzuzo kunye nokulahlekelwa kweoli kuya kuthatha ixesha elide. Unokulindela ukubona ukuzuza kwemisipha ngaphakathi kweveki yokuqala kunye neziphumo zokulahlekelwa kwintsikelelo kwiiveki ezimbini. KUNYE, abo bazuzekileyo bathembekile .... Abasebenzisi bahlala belahlekelwa yiyo yonke into abayifumanayo xa bephuma emjikelezweni wabo.
I-Trenbolone I-Acetate powder Iziphumo zeZakhiwo zeMiscle
Ngoko ke, ungaziphi na umsila onomjikelezo we-trenbolone? Gcina ukhumbule ukuba ekubeni i-trenbolone acetate powder yi-superman ye-steroids, uya kufumana iziphumo ezilungileyo kakhulu (umsizi, amandla kunye nokulahlekelwa kwexabiso) kodwa kungengona ziphumo ezilungileyo kakhulu.
Ukuba iinjongo zakho kuphela zakhiwo zesistim ungaba ngcono nge-dianabol kwaye ukuba umgomo wakho kuphela ukulahlekelwa yintlungu ungase ube ngcono kunye ne-clenbuterol.
Nangona kunjalo, i-Trenbolone i-acetate powder isengumntwana onamandla kakhulu kwaye unokulindela ukuzuza kwemisipha enkulu kwiintsuku zokuqala ze-30. Unokufumana i-15 - 20 lbs ye-muscle kwiintsuku zokuqala ze-30 ngelixa ulahlekelwa ngamanqatha omzimba kwaye ukhulise amandla.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ezo zi15 - 20lbs ziza kuba zizinzi ezinqambileyo, ngenxa yokuba ungeke ubeke phezu kwayo nayiphi na isisindo samanzi ngendlela onokuyenza ngayo ngeDbol kunye nezinye izakhiwo ze-steroids. Ubunzima bobunzima bunokuba buncinane kodwa ekubeni ungabambeli naluphi na ubunzima obuninzi bamanzi, mhlawumbi ukuba i-muscle ye-muscle ephilileyo iya kuba yinto efanayo.
I-Trenbolone i-Acetate powder Iziphumo Ukulahleka Kwempahla
Ndifuna nje ukwenza into eyodwa icacile. Kufuneka uhlale unesiphelo sekhalori ukuba ufuna ukutshisa i-fat, kungakhathaliseki ukuba usebenzise ntoni. Ngoko ukuba udla njengengulube imihla ngemihla kwaye uthatha i-trenbolone acetate powder kwaye ulindele ukuba iziphumo zivele nje ngaphandle kwemizamo, unokuthi udideke.
Ngaloo nto, i-trenbolone acetate powder iphumelela kakhulu ekudaleni i-ripped, imizimba ye-vascular ngokukhawuleza.
Mhlawumbi inzuzo enkulu yokulahlekelwa kwesisindo esikuyo kukuba ilahla konke ubunzima obuninzi bomzimba wakho onokubamba. Xa kwenzeka oko uya kukhangela kwangoko kwaye uzive ungcono. Uya kwangoko ukrazula ngaphandle kokusika nayiphi na iikhalori ekudleni kwakho kuba ukulahlekelwa kwamanzi akufani nokulahlekelwa kweoli. I-abs yakho iya kubonisa kwaye iingalo ziya kutsalwa.
I-Trenbolone i-Acetate powder Iziphumo Zamandla Okuzuza
Mhlawumbi into ongayibona ngokukhawuleza kukuba amazinga akho omandla akhula ngokukhawuleza ngokukhawuleza. Unokulindela ukuhlakulela kuzo zonke iiflethi zakho. Yintoni eyayiva nzima kakhulu ngoku ivakalelwa njengale mabhinqa amancinci amancinci kwii-50 zazo ngamanye amaxesha ayisebenzisa.
I-trenbolone i-acetate powder yi anabolic steroid esasetyenziselwa okokuqala iilwane kunye neenkomo zeenkomo ukwenzela ukwandisa ukukhula kwemisipha kunye nesondlo kwimveliso yezilwanyana, ngokuqhelekileyo njengengcambu efakwe phakathi kwesikhumba kunye ne-cartilage yeendlebe. Kufunyenwe ukuba nefuthe elihle ekunyuseni komzimba kunye nokutshiswa kweoli xa kulawulwa ngabantu. Ukwandisa i-half-life-effective effectiveness, i-trenbolone ayithathi ibhaliwe, ilawulwa njenge-derivative ester ngendlela ye-trenbolone acetate, i-trenbolone enanthate, okanye iParabolan. I-Trenbolone i-compounds ine-five androgen receptor ebopha umxube we testosterone. Xa i-metabolized, iyakwandisa i-ammonium ion i-muscle ye-muscle, ekhokelela ekunyuseni izinga leprotheni. Kwakhona kunciphisa izinga le-catabolism kwaye kushukumisa ukutya, oku kubangela ubuninzi obuninzi. I-trenbolone i-acetate powder isoloko ithathwa ngokujikeleza, ngenjongo yokwenza isisindo okanye ukunciphisa. Ezi zintathu zivame ukusetyenziswa kunye:
Ngokuqhelekileyo kuthiwa 'fina' ngabasebenzisi (njengokuba kwasekuqaleni kuvela ekuqothulweni kwePelaplix H ipelisi okanye iipilbolone iipilisi), i-trenbolone acetate ihlonishwa kakhulu ngabakhi bomzimba abaninzi njengeyona analilic steroid exhaphakileyo. Yakhiwe ngokufanayo noD deca Durabolin, kwaye iyaziwa ukukhusela izicubu ezinamahlunu ezinokutshiswa ngenxa yamandla ngexesha 'zokucima izicwangciso', ngaloo ndlela zigcina ubukhulu bomzimba. I-trenbolone acetate ayikhuthazi ukugcinwa kwamanzi, oko kuthetha ukuba nganye isilima sobunzima obuyifumanayo ngenxa yokusetyenziswa kwesi songezelelo siya kuba sisisindo somzimba esisondayo. Ukufumana iziphumo ezilungileyo, intlawulo yekhalori kufuneka iphakanyiswe ngaphezu kwamanqanaba okugcina.
Okwangoku, baninzi abathengisi be-steroid powder kwi-intanethi, intengo kunye nemigangatho eyahlukileyo. Ngokombuzo weebuzo, sifumana abathengi abaphakamileyo ngaphezu kwe-80% yeqabile, kula ma shishini, kukho umxhasi we-steroids ephuma e-China, efumene impendulo yamakhasimende enhle, ayikho kuphela kumgangatho weemveliso, kunye nenkonzo yabathengi, intle kakhulu. Oku kunika imfuneko enkulu yokuthenga abathengi be-Trenbolone i-Acetate powder inikezela ngokukhethekileyo.
Umvelisi wezobisi osebenzayo we-steroid raws, i-steroid raws impahla, ipowder eluhlaza, i-testosterone enanthate powder, i-enanthate powder, i-steroid eluhlaza, i-powder, i-stoid bodybuilding powder, i-Cypionate eluhlaza, i-RAID eluhlaza, i-sarms, njl njl njl. , ogama linguAASraw Biochemical Technology Co., Ltd.
Inkonzo evela kwi-AASraw Biochemical Technology Co., Ltd:
1) Umgangatho ophezulu: USP 35
2) Ucoceko:> 99%
3) Singumvelisi kwaye sinokubonelela ngeemveliso eziphezulu zexabiso ngeteksi.
2.Fast nokukhusela okukhuselekileyo:
3.Sibaxumi kwihlabathi lonke:
Ingcaciso yakho ebalulekileyo:
Ixesha lokuzisa: Zithunyelwe kwiiyure ze-12 emva kokufumana inkokhelo yakho.
Ukupakisha: Ngokomlinganiselo wemveliso, uhlobo lwemveliso, iimfuno zabaxhasi.
Ukwahlukana, ukhuseleko, Nceda unganqikazi ukudibana nam ngolwazi olungakumbi.
Iinkcukacha zoPakethe: Ngokwenani lemveliso, uhlobo lwemveliso, iimfuno zabaxhasi.
Ukuhambisa ngenqanawe: Iimpahla ziya kuthunyelwa kwiiyure ze-12 emva kokufumana inkokhelo yakho. Kwaye ixesha lokuthutha li malunga neentsuku ze-7.
Iinkcukacha zentlawulo: I-T / T, ibinzana lesininzi, umanyano osentshonalanga, igrama yemali.
Thenga I-Trenbolone i-Acetate powder ngoku !!!
I-SARM esetyenziswa ngokuqhelekileyo: Kukuphi ukuthenga i-SARM powder eluhlaza kwixabiso elinamandla? I-Fluoxymesterone / Halotestin ipowusi eluhlaza Isingeniso